Guddiga Farsamada Shirka Midnimo oo maanta u Ambabaxay magaalada Garbahaarey “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddiga Farsamada Shirka Midnimo oo maanta u Ambabaxay magaalada Garbahaarey “SAWIRRO”
Gudiga qaban-qaabada shirka Midnimo 2 oo maalmihii u danbeeyay waday kulamo gooni gooni ah oo ay la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada kasoo jeeda Jubbooyinka ee ku sugan gobollada Jubbooyinka iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, ayaa maanta soo gabagabeeyay howshoodii, waxaana ay u ambabaxeen magaalada Garbahaarey halkaas oo horaanta todobaadkan uu ka furmayo shirku.
Gudoomiyaha guddiga qaban qaabada Shirka Sheekh C/kariin Shekh Ibrahim (Indho-cadde) ayaa sheegay in ay maanta kusoo gabagabeeyeen howshii ay ka hayeen Muqdisho, isla markaana ay u ambabaxeen magaalada Garbaaharey halkaas oo todobaadka soo socda uu ka furmayo shirku.
“Maanta waxaan u dhoofnay Garbahaarey, kulamo badan ayaan la yeelannay odoyaasha beelaha dega Jubooyinka, si guul ah ayay inoogu dhamaatay, waxaana diyaarinnay ergadii ka qeybgeli lahayd shirweeynaha dib u heshiisiinta, waxana aan maanta ku wajahanay Garbahaarey oo shirku ka dhacayo” ayuu yiri Sheekh C/kariin.
Masuulkan ayaa sheegay in ergada lagu soo xulay hab degmo-degmo ah, isagoo intaa ku daray in aysan jirin wax cabasho ah oo kasoo laabatay habka ay u qeybiyeen ergada ka qeybgaleeysa shirka, isla markaana ay soo wada xaroon doonaan ergada.
Shirka dib u heshiisiinta ayaa la filayaa in uu si rasmi ah uga furmo magaalada Garbahaarey bishan, waxaana la filayaa in shirweeynahaasi lagu soo afjaro qilaafkii siyaasadeed ee ka jiray Jubooyinka sixitaan guudna lagu sameeyo qaladaadka muuqda, iyadoo la rajeeynayo in beelaha Jubbooyinka ee wax kala tabanaya ay iskugu iman doonaan shirka.
Goobo ganacsi oo ku yaalla dalka Koonfur Afrika oo boob loo geystay “SAWIRRO”
Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado Riyadh in uu kula kulmo Boqorka Cusub ee Sacuudiga “DAAWO”
Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado Riyadh in uu kula kulmo Boqorka Cusub ee Sacuudiga "DAAWO"